Reelevant: Rarama Email ungwaru Tekinoroji | Martech Zone
Reelevant: Rarama Email ungwaru Tekinoroji
China, January 21, 2016 Monday, May 16, 2022 Douglas Karr
Indasitiri ye email ine matambudziko maviri makuru nekuenderera kwayo kushandiswa kwekutumira mameseji:
Personalization - Kutumira iwo iwo meseji, panguva imwe chete, kune vese email vanyoreri havasi kuwana iwo chaiwo meseji kune chaiyo nguva kune chaiye mugashiri. Sei Marianne, ane makore makumi maviri nemana ekuberekwa, achigashira iwo iwo zvipo zvakafanana naMichael, ane makore makumi mashanu nemanomwe, ivo vachifarira zvinhu zvakasiyana? Sezvo mugashiri wega wega akasiyana, saizvozvowo meseji Maemail akasarudzika anounza kakapetwa katanhatu mitengo yekutengesa, asi 24% yemakemikari anotadza kuishandisa zvinoenderana MarketingLand.
Attention -Kutora nguva ndiro rimwe dambudziko nekutumira mameseji. Kunyangwe kana zvirimo zveemail zvakasarudzika, ese maemail anotumirwa panguva imwe chete kune wese anogamuchira. Izvi zvinodaro kunyangwe munyoreri wega wega ane mararamiro akasiyana, maitiro, kana kunyange nzvimbo dzenguva. Nekuitumira panguva imwe chete, kambani ichapotsa vanhu vazhinji vangangove vakafarira kupihwa asi vakaigamuchira kunze kwehwindo rekuita.
Tumira nguva optimization inogona kukonzera 22% kuvandudzwa mukuita email.
Email kushambadzira ichiri inofarirwa chiteshi yakanyorwa nevatengi kuti vagamuchire kushambadza kubva kumabhureki avanofarira. Makambani anoziva kuti saka vanoramba vachitumira maemail mazhinji asi nemakwikwi muinbox achiwedzera hasha mazuva ese, kushomeka kwekuenderana kwemaemail kunokanganisa kudzoka kwekudyara kwemhando dzinoitumira.
Kugadzirisa Dambudziko Rekutumira Misa
Vatengesi vakaedza kuita yavo yeemail kushambadzira mishandirapamwe nekungoisa avo vekutanga mazita kune avo meseji kana mune wenyaya mutsara. Pfungwa apa yaive yekuita kuti iye anogamuchira anzwe kuti email yakanyorwa uye yakatumirwa kwaari / iye chete. Zvisinei, vanogamuchira havanyengedzwe kuti nyore… kunyanya kana zvemukati meemail zvisina kugadzirirwa ivo.
Vashambadziri vane data rakawanda pane mumwe nemumwe anonyorera nhasi kupfuura zvavasati vamboita. Nehurombo, ivo vanogona kunge vasingazive kuishandisa zvizere kana kuve nechishandiso chine simba rakakwana kuti riwedzere. Pamwe nyaya yacho yanga isiri yekutengesa, zvave izvo kuti kune mapuratifomu eemail chete. Reelevant yakagadzira chigadzirwa chine simba, asi chiine ruzivo chinobvumidza zvikwata zvekushambadzira kushandisa idzi data kutumira maemail akakodzera, panguva kwayo, kune mumwe nemumwe anyorese.
Reelevant inorarama yeemail huchenjeri tekinoroji inoongorora mamiriro ekuvhura uye hunhu hwemumwe neumwe mugashiri kuti ape meseji panguva yakanakisa uye aratidze zvirinani zvirimo mune chaiyo-nguva.
Pakuvhura kwega kwega email, Reelevant inoshandura zvirimo zvemeseji munguva chaiyo kune mumwe nemumwe anogamuchira zvichienderana nechishandiso, nzvimbo, uye mamiriro ekunze pane yakapihwa nzvimbo nenguva. Iyo fashoni e-commerce webhusaiti, semuenzaniso, ichakwanisa kumisikidza mushandirapamwe wayo wekuratidzira majasi anonaya uye bhurugwa kana kuchinaya kana iye anogamuchira achivhura email, uye T-shirts uye zvikabudura kana kuchinge kwave nezuva apo anenge achigamuchira anovhura iyi email zvakare.
Reelevant inomira kunze kwekutumira mameseji nekungotumira maemail panguva dzakasiyana kune mumwe nemumwe anyore. Kuti uone nguva yakanakisa yekuita neumwe neumwe wavo, mapuratifomu epuratifomu anoongorora maitiro avo uye maitiro neemail yega yega yavanogamuchira. Iyo yakawanda maemail anotumirwa, nekuchenjera iko kunyorera kunowana.
kuburitsa: Martech Zone iri kushandisa affiliate links muchinyorwa chino.
Tags: Dragora uye udonesedhonza uye udonhedze anovaka emailzvine simba zvemukatitsambambozha personalizationemail kutumira nguvaPersonalizationreelevantkutumira nguvakutumira nguva yekugadzirisa
CloudCraze: Iyo Ecommerce Platform Yakavakirwa Salesforce
Kuparadzanisa Vatengi ndiyo Kiyi Yako kune Bhizinesi Kukura Muna 2016